Home News Maamulka Degmada Warta-nabadda oo Bilaabay in ay shacabka Lacago Xoog ah...
Maamulka Degmada Warta-nabadda oo Bilaabay in ay shacabka Lacago Xoog ah ka qaadaan (Cadeeyn Ducements ah )
Maamulka Degmada Warta-nabadda Ee Gobolka Banadir ayaa waxaa ay dadka shacabka ah kusoo rogeen lacago min 10-doolar ah oo guri walbo laga qaadaayo taasi oo aan la ogeeyn halka ay jaan dhiganeeyso,maadaama aysan ku baxeeyn sifo sharci ah.
Masuuliyiinta Waaxaha Maamulka Degmada Warta-nabadda ayaa guryaha ku yaala degmada ku amray in ay soo xaadiraan waaxyaha islamarkaana ay bixiyaan Lacago gaaraya 10$ taasi oo qasab u ek.
Mid ka mid ah Haweenka Lacagtaasi sida qasabka ah looga qaaday oo la hadashay Warbaahinta ayaa waxaa ay sheegtay in Gudoomiyaha Waaxda Barwaaqo oo lag magacaabo cali”Barwaaqo” in uu ku amray lacagtaasi bixinteeda.
Muqdisho Online ayaa waxaa ay heshay qaar ka mid ah Warqadaha loo diyaariyay in ay saxiixaan dadka Shacabka ah si ay lacagtaasi u bixiyaan waxaana ay kala Yihiin,Sawirada hoose eeg.
Lacagtaan ayaa waxaa inoo xaqiijiyay in ay si toos ah ugu dhaceeyso jeebka Gudoomiyaha Waaxda Barwaaqo iyo Gudoomiyaha Degmada Warta-nabadda seeynab Xaabseey inkastoo lagu soo qoray warqada afurin hadana waxaa hubaal ah in taasi ay tahay Shaati loo galinaayo.
Su’aasha la isweeydiinaayo ayaa ah sidee Sadaqo xoog ah loo qaadaa,ma bulshada ayaa been loo sheegayaa misa qaab kale oo lacagtaasi lagu xalaalsado ayaa lagu dhici wayay.
Previous articleXanuunka Dadka Muqdisho, Xooleysiga Kheyre, Xabadda Shabaab iyo Beenta Farmaajo
Next articleWar Degdeg ah: Shaqaale 80 ku dhow ayaa laga eryey shaqooyinkoodii iyadoo loo aaneeyey inay reer Muqdisho yihiin
C/raxmaan C/shakuur”Farmaajo waxaa uu ku fashilmay waxyaabahii uu afkiisa ku balanqaaday”
Isburinta Dawladda: Yaa amray in Wasiirka Gaadiidka ay Beeniso Heshiis uu...